Keliya Row dhululubad silsilad
Qaadista Rullaluistemadka Wareega Labaad
Qaadista Kubadda Xiriirka xagasha
Dhalista Wadajirka ah
Dufanka Saliida Silicone
Ogeysiiska Fasaxa Maalinta Shaqaalaha
Dhamaan macaamiisha qiimaha leh: Waxaan ku jiri doonnaa fasax 1-da ilaa 5-ta May, waxaa laga yaabaa in jawaab soo daaho inta lagu jiro waqtigan sababtoo ah xaddidaadda gelitaanka emaylka, Aad ayaan uga xunnahay dhibaatada ka dhalatay ciida. Fadlan nagala soo xiriir wechat ama whatsapp adigoon ka labalabeyn haddii aad baahi u qabto, waxaan ...
Isbedelada muhiimka ah ee Warshadaha Caalamiga ah
Dhalitaanku waa qaybo muhiim u ah mashiin kasta. Kaliya maaha inay yareeyaan khilaafaadka laakiin sidoo kale waxay taageeraan culeyska, gudbinta awoodda waxayna ilaaliyaan isku dheelitirka sidaas darteedna waxay fududeeyaan hawlgalka hufan ee qalabka. Suuqa Bearing Global waa kudhowaad $ 40 Billion waxaana lafilayaa inuu gaaro $ 53 Billion 2026 iyadoo ...
17th, Feb 2021 Bilaab Ogaysiiska Shaqada
Saaxiibbada qaaliga ah, Tan iyo markii aan soo dhaafnay fasax dheer oo ka bilaabmay 1, Feb ilaa 17th, Feb sababtoo ah Fasaxa Dayrta ee Shiinaha Hadda waxaan dhammeynay fasaxii oo aad iyo aad u xiiso badan ayaa shaqadeenii bilaabay 17-kii, Febraayo 2020. Saaxiibbada adduunka ku soo dhowow oo nagala xaajooda ganacsiga. Waxaan ku talin doonaa tayada ugu fiican, pr ...
Sidee loo tijaabiyaa tayada dufanka?
Wadamada qaar aad ayey u adagtahay in lagu tijaabiyo tayada dufanka qalab ahaan, waxaan soo qaadaneynaa hab fudud oo aan ku tijaabin karno tayada dufankaaga, si aan kuu ogeysiino tayada dufankeena. Maanta waxaan qaadaneynaa fiidiyowga ku saabsan baaritaanka tayada dufanka, waad hubin kartaa tayada alaabtaada oo waad isbarbar dhigi kartaa! Kuwa ugu fiican ...
Barkimadda dhalidda xannibaadda
Soo saaraha xirfadleyda gudaha ee barkin-saarista barkinta ayaa leh in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah.
Multipurpose Lithium Saldhig Dhibic Dhibic Ka Badan 180 ℃ 180kg Drum
Felicia waxay soo bandhigaysaa alaabooyin.
MULTIPURPOSE LITHIUM BASE GREASE NLGI3 mp3 QODOBKA INTA BADAN 180 ℃ MULTIPURPOSE QALABKA SALDHIGA NLGI3 mp3 QODOBKA QODOBKA 100 ℃ BULUUQADA SARE EE CAGAARASHA (HP) QODOBKA INTA BADAN 29,000 0
Alaabtii ayaa loo raray adduunka.
1 * 40ft weel + 1 * 20ft xamuul xamuul ayaa dhowaan la raray. Tayada ayaa qancisay macaamiisha. Aamina, nala shaqee, waa inay u qalanto.